Orinasa silikao - mpanamboatra sy mpamatsy silika any Sina
Ireo entana silika dia raisin'ireo olona rehetra satria madio sy malefaka io toetra io. Silikona maro no kilasy sakafo, azo ampiasaina amin'ny vokatra manohina ny sakafo. Ny karazana endrika, endrika ary loko isan-karazany dia azo alaina ho an'ny entana silika mba hampisehoana na hanehoana ny hevitry ny mpamorona, eny fa na ny fanahy ao anatiny aza. Ny entana vita amin'ny silipo izay fanaontsika matetika dia fehin-tànana na fehin-tànana misy haingon-trano samy hafa, rojo vy, fonosana telefaona, kitapom-batsy sy kitapo, kapoaka, fonosana amin'ny takelaka, sisirano, kojakoja an-dakozia hafa sns. Ny fitaovana dia afaka mandalo ny karazana fitsipiky ny fitsapana rehetra ataon'ny US na ny Institution eropeana, azafady matokia fa azo antoka ny fampiasana ireo entana mikasika ny sakafo. Ny fanontanianao dia tsy maintsy alamina ao anatin'ny 24 ora avy amin'ny ekipanay mahomby. Ny kalitao tsara indrindra, ny vidin'ny fifaninanana, ny fotoana famokarana fohy ary ny serivisy tsara dia tokony hanome anao fahafaham-po amin'ny fifandraisan'ny orinasa.
Kitapo keychain an'ny poketra silipo
Magnetic Bracelet ho an'ny volo volo